Aqalka Sare oo kulankiisii labaad ee kalfadhiga Afaraad ku yeeshay Muqdisho – Kalfadhi
Guddomiyaha Aqalka Sare Muddane Cabdi Xaashi Cabdullahi ayaa shir guddomiyay maanta kalafadhiga 4-aad kullankiisa 2-aad oo uu Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya maanta ku yeeshay xarunta Aqalka Sare .
Ajendaha ayaa ahaa: dhageysiga warbixinta guddomiyaha Golaha Aqalka Sare
dhageeysiga akhrinta 2-aad hindise-sharciyeedka biyaha iyo sameynta hay’adda maareynta biyaha qaranka.
Hadal jeedinta kaddib ayuu guddoomiye Cabdixaashi Cabdullaahi farriin u diray dadka ku dagaallmaya deegaanno ka tirsan Gobolka Sool. waxa uuna kula dardaarmay iney joojiyaan dirirta. Waxa uu sheegay in xogta uu hayaa ay illaa hadda halkaas ku dhinteen ku dhawaad 80 ruux.
Intaas kaddib, waxaa warbixin akhrinta labaad ee hindise-sharciyeedka biyaha iyo sameynta hay’adda maareynta biyaha qaranka laga dhageeystay guddoomiyaha guddiga kheyraadka biyaha qaranka, kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka Sanator Ilyees Cali Xasan.